Dielectric သည် VHF အားပိုမိုအားကောင်းလာစေမည့် TV Spectrum Repack အတွက်အစုစုကိုအားဖြည့်ပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မကြာမီတီဗီ Spectrum Repack များအတွက် Dielectric အားကောင်းလာစေရန် VHF Portfolio
အဆိုပါကျစ်လစ်သိပ်သည်း MT6E6-4K filter ကိုမစိုက်ရုပ်သံလိုင်း tuning ထိခိုက်စေနိုင်သောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအတက်အကျမှ adapts
နယူးဘရော့ဘန်းအင်တင်နာ, tunable filter ကိုပိုမိုမြင့်မားထိရောက်မှုကိုဆောင် ခဲ့. ထုတ်လွှင့်ဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ထံမှဖက်ပြောင်းနှင့် / သို့မဟုတ် RF အပင်ဝေမျှ
Raymond, မိန်း - ဖေဖော်ဝါရီလ 29, 2016 - Dielectricတီဗွီနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်-အင်ဂျင်နီယာအင်တာနာများနှင့် RF စနစ်များအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦး, High-တီးဝိုင်း VHF ထုတ်လွှင့်မယ့် tunable, bandwidth ကို-အကျိုးရှိစွာ option ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအသစ်တခုဘရော့ဘန်းတီဗီပေးပို့မှုစနစ်ဖန်တီးထားသည်။ အဆိုပါ 2016 မှာထုတ်ဖော်ပြသခံရဖို့ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်, NAB ပြရန် (ဧပြီလ 18-21, Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ) single- နှင့် Multi-ရုပ်သံလိုင်းတီဗီစစ်ဆင်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့အသစ်တစ်ခု slotted, sidemount အင်တင်နာများနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း RF filter ကိုပါဝင်သည်။ Dielectric Booth C2213 မှာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသီးခြားစီ, နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန်ပြပေးလိမ့်မယ်။
လိုင်းများ 7-13 ဖြတ်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့အင်ဂျင်နီယာ, အနိမ့်ပါဝါကိုဖြေရှင်းချက်တီဗီရောင်စဉ် repack အခြားကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်တည်ဆဲလှိုင်းနှုန်းသည် UHF လှိုင်းလွတ်သွားပါမည်သော Multi-တစ်နှစ်အစိုးရကပဏာမ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် High-တီးဝိုင်း VHF ကူးပြောင်းလှိုင်းနှုန်းသည် UHF ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စံပြဖြစ် ။ အဆိုပါစနစ်အားလည်းဂီယာက်ဘ်ဆိုက်များအတူတူ RF အခြေခံအဆောက်အအုံမှတဆင့်တစ်ဦးထက်ပိုရုပ်သံလိုင်း multiplexing မှတစ်ဦးထက်ပိုကုန်ကျစရိတ်-ဖော်ရွေ, စစ်ဆင်ရေးအကျိုးရှိစွာလမ်းကိုမျှဝေကြောင်း VHF ထုတ်လွှင့်ပေးသည်။
အဆိုပါကျစ်လစ်သိပ်သည်း MT6E6-4K filter ကိုမစိုက်ရုပ်သံလိုင်း tuning filter များထိခိုက်စေနိုင်သောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအတက်အကျမှ adapts
အသစ်အင်တင်နာနှင့်စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက် Over-the-air ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အနေနဲ့တတ်နိုင်ကုန်ကျစရိတ်မှာအသက်ရှည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ accentuates သောကုမ္ပဏီ၏အမှတ်တံဆိပ်အင်ဂျင်နီယာအရည်အသွေး, ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း VHF များအတွက် key ကို Dielectric တီထွင်မှုမိတ်ဆက်ပေး။ ဤရွေ့ကားတီထွင်မှုမြင့် VHF တီးဝိုင်းကိုဖြတ်ပြီးကြိမ်နှုန်း tuning ရိုးရှင်းစွာသောသစ်ကို TLSV-BB စီးရီးအင်တင်နာ, များအတွက် stripline slot ကဒီဇိုင်းပါဝင်သည်။ ဤသည်ဘရော့ဘန်းချဉ်းကပ်မှုအကြိမ်ရေ-တိကျတဲ့အင်တာနာများထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များဖယ်ရှားနှင့်တစ်ဦးမျှဝေ site မှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော VHF ထုတ်လွှင့်ထောကျပံ့ဖို့အခြေခံအုတ်မြစ်တည်စေ။
"slot အင်တာနာအများအားဖြင့် narrowband ဒီဇိုင်းများပူဇျောပါပွီစဉ်သမိုင်းကြောင်းအရ, VHF အင်တင်နာ, ကြီးမားတဲ့ dipole Array ကိုသို့မဟုတ် panel ကအင်တင်နာဖြစ်စေခဲ့ကြပါတယ်" ဟုယောဟန်ကို Schadler, အင်ဂျင်နီယာ, Dielectric ၏ VP ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့နေတဲ့ဘရော့ဘန်းသည့်စနစ်သို့ stripline နည်းပညာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ VHF မှ Dielectric အားဖြင့်ရှေ့ဆောင်ကပိုထိရောက် slotted လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အင်တာနာဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးနည်းစနစ်အသစ်တွေတိုးချဲ့ပါပြီ။ ဤသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးဘုံဒီဇိုင်းမှအမြင့်မားတဲ့ VHF တီးဝိုင်း၌ရှိသောရုပ်သံလိုင်းလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်သေချာ။ "
ထုတ်လွှင့်ဆိုဒ်များမျှဝေသို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပို VHF ရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင် Dielectric ရဲ့အသစ် MT6E6-4K Tunable VHF Filter ကိုတစျဆငျ့ကြောင့်ထိရောက်မှုများကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။
အဆိုပါ MT6E6-4K သန့်ရှင်းမှုအတူတူပင်ဗိသုကာတဆင့်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို channel များကိုစစ်ထုတ်ပေးတဲ့လျော်ကြေးပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဒီဇိုင်းကိုမိတ်ဆက်။ ဒါကဒီဇိုင်းကိုမစိုက်အချက်ပြမှုများတွေကို RF filtering ကိုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ရွှေ့အဖြစ်ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများဆိုးရွားစွာရုပ်သံလိုင်း tuning အကျိုးသက်ရောက်စေမသေချာ, ထိုကဲ့သို့သောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုမှ adapts ။ တစ်ဦးကကျစ်လျစ်, ဒီဇိုင်းကိုကြမ်းပြင်, မျက်နှာကျက်သို့မဟုတ်ကက်ဘိနက်-တပ်ဆင်ထားတပ်ဆင်မှုအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် options များနှင့်တကွ, RF စက်ရုံအတွင်းပိုင်းထုတ်လွှင့်ဖို့အဖိုးထိုက်အိမ်ခြံမြေပြန်လည်ရောက်ရှိ "ခေါက်" ။
အသစ်က Dielectric ဘရော့ဘန်း VHF စနစ်များသည်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်:
အဆိုပါ TLSV-BB စီးရီးအင်တင်နာအလေးချိန်လျှော့ချ, panel ကအင်တာနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖွင့်ဖို့ 75 ရာခိုင်နှုန်းလေတိုက်ဝန်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ
အနိမ့်လေတိုက်ဝန်အလားအလာလှိုင်းနှုန်းသည် UHF-to-VHF ရုပ်သံလိုင်းအပြောင်းအလဲများကိုစဉ်အတွင်းမျှော်စင်အားဖြည့်စရိတ်နှင့်လိုအပ်ချက်လျော့နည်းစေ
Cardioid azimuth ပုံစံအကောင်းဆုံးမျှော်စင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-based ်ရောက်စွက်ဖက်အသေးအဖွဲ, directional, hemisphere လွှမ်းခြုံများအတွက် sidemount installation ကိုထောကျပံ့
ကျစ်လစ်သိပ်သည်း MT6E6-4K filter ကိုခြေရာကိုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအရေအတွက်လျော့ကျစေပါတယ်
Convection-အအေးဒီဇိုင်း filtering ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးမတူညီ High-တီးဝိုင်း VHF အပူချိန်များအတွက်ပိုကောင်းလျော်ပေးတယ်
Raymond, မိန်းထဲမှာ ased Dielectric LLC Sinclair တစ်လုံးလုံးပိုင်လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ Dielectric ဆန်းသစ်ထုတ်လွှင့်ထုတ်ကုန်များတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဝေးလံခေါင်သီဘူတာကနေအဓိကစျေးကွက်မှ, Dielectric 1942 ကတည်းကတိုင်းလိုအပ်ချက်တို့အတွက်ဖြေရှင်းချက်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dielectric အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးဆန်းသစ်, ဖောက်သည်ဗဟိုပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် www.dielectric.com
2015 NAB ပြရန် 2016 NAB ပြရန် အွန်တင်းနား အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း dielectric စိစစ်မှုများ NAB 2015 NAB ပြရန် Show ကို 2015 NAB NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး လေထုကျော် ရောင်စဉ် repack ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-02-29
ယခင်: LED ကိုတူရိယာနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုထုတ်လွှင့်စတူဒီယို်လင်းဖို့ကိုဘယ်လို
နောက်တစ်ခု: Wisycom ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ RF ဖြေရှင်းချက်ဒီမိုကရက်တစ် Debate ၏ CNN ကလွှမ်းခြုံဘို့နဲ့ Big Winner ကြေငြာခြင်း